China abakhiqizi bezindlu zokuhlunga i-Stainless Steel kinda
Uchungechunge lwe-QDY / QDK lwezihlungi zensimbi engagqwali ziyi-304 noma i-316L izihlungi zensimbi ezingenasici, zine-desig enengqondo, isakhiwo esihlangene nokuma okuhle, futhi ingasusa i-faceplate, ayinayo i-angle efile, ukufakwa kokuhlanza kulula futhi kulula. Ubuso bangaphakathi bucwebezelwe kahle, buhlangabezana nezidingo zezinga lempilo futhi buvumelana nezinga le-GMP. Izihlungi ze-QDY / QDK zisetshenziswa kabanzi kwezokwelapha, ekudleni, embonini yamakhemikhali, e-electronics nasezimbonini zokuvikela imvelo. Izihlungi ze-QDY zinguchungechunge lokuhlunga uketshezi kanye nezihlungi ze-QDK uchungechunge lokuhlunga igesi.
Uchungechunge lwe-QDY / QDK lwezihlungi zensimbi engagqwali ziyi-304 noma i-316L izihlungi zensimbi ezingenasici, ezine i-desig enengqondo, isakhiwo esihlanganisiwe nesimo esihle, futhi ingasusa ifayela le- i-faceplate, ayinayo i-angle efile, ukuhlanzwa ukufakwa kulula futhi kulula. I- indawo yangaphakathi icwebezelisiwe kahle, ihlangabezana nezidingo zezinga lempilo futhi ihambisane izinga le-GMP. Izihlungi ze-QDY / QDK zisetshenziswa kakhulu kwezokwelapha, ukudla, amakhemikhali izimboni, elekthronikhi, kanye nezimboni zokuvikela imvelo. Izihlungi ze-QDY zingamanzi uchungechunge lokuhlunga kanye nezihlungi ze-QDK zinguchungechunge lokuhlunga igesi.
Ama-Filter housings afakwe ama-gauges nemibhobho yokukhipha phezulu nama-valve okuhambisa indle namanani wesampula ngezansi. Indlu eyodwa yesihlungi se-316L ifakwe ukuvulwa kobubanzi obukhulu, kusiza umjovo nokumanziswa kwezihlungi. Amamitha wokuvuleka nezixhumi anezinhlobo eziningi zokucaciswa kokukhethwa. Umklamo omuhle nokwakheka okunengqondo kwenza izindlu zingabi bikho ekufeni; izinsalela ezincane zinciphisa amathuba okutheleleka.
Imininingwane Key kanye Ubukhulu
Materials Izinto zokwakha izindlu: SS304, SS306L
Cl Hose ngocingo noma umshudo: SS304
-O-izindandatho: iraba abicah, iraba ye-fluorine, i-EPDM, njll
Ukungena / ukuphuma kokuxhumeka
Ukuxhumeka okuphezulu nangaphansi
Langaphambilini ukugeleza okukhulu kwesihlungi se-cartridge
Olandelayo: intambo yenxeba lokuhlunga igobolondo
Uhlobo lweJacket Heater Elektroniki
TC Series carbon ukususwa isihlungi izindlu